Saddexda Xisbi Siyaasadeed iyo Komishanka Doorashooyinka Somaliland oo ka hadlay xaaladda Buuhoodle | Somaliland.Org
Saddexda Xisbi Siyaasadeed iyo Komishanka Doorashooyinka Somaliland oo ka hadlay xaaladda Buuhoodle
May 29, 2010	Hargeysa (Somaliland.Org)- Saddexda Xisbi Siyaasi iyo Guddida Doorashooyinka Somaliland, ayaa ka hadlay xaaladda gobolada bariga Somaliland, gaar ahaan xaaladda Deegaannada Sool iyo Buuhoodle.
Saddexda Xisbi ee KULMIYE, UDUB iyo UCID, ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay xaaladda Gobolka Sool, gaar ahaan Magaalada Laascaanood iyo sidoo kale Deegaanka Buuhoodle oo dhawaan dagaallo ka dhaceen.
Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, ayaa ka hadlay shaqaaqooyin dhawaan ka dhacay Magaalada Buuhoodlle iyo sidoo kale Laascaanood, waxaanu arrintaa ku tilmaamay dayac ka yimi Xukuumadda Madaxweyne Rayaale, isaga oo eedda dagaalkaasna dusha u saaray dad uu sheegay inay dibadaha isaga soo bahaysteen inay dagaal ridaan. “Waanu ka xunnahay dadkaa ku geeriyooday shaqaaqooyinka, maxaa yeelay maanta looma baahna in Dhiig dambe reer Somaliland ama Soomaali oo dhan ka daata. Dhibaatada halkaa ka taagan, waxaanu dusha ka saaraynaa dadka iska soo urursaday dibadaha ee ka yimi Maraykanka iyo Yurubta kale ee dhulkii maatidu deganayd damacsan inay dab geliyaan, iyagoo og dhibaatada Soomaali ku dhacday, halkii ay 18-ka sanadood burburkii Soomaaliya la burbursanayd Somaliland oo ka nabad gashay, ay ugu faani lahaayeen ee ay nabadgelyada ka adkayn lahaayeen ee ay horumarka ummada ka shaqayn lahaayeen. Dadkaasi lacagtii qaxoontigay soo gurteen oo waxa ummadoodii dabka galiyey qaxa geliyey lacagtaas ayaa kaw ka ah. Ta labaad, waxa canaanta ku leh dawlada Somaliland ee ku guuldaraysatay Buuhoodle oo Burco dusheeda ah inay maamulka gaadhsiiyaan.” Ayuu yidhi Faysal oo ka mid ahaa masuuliyiinta Xisbiyada ee ka hadlay xaaladda bariga dalka, kuwaas oo u waramay Telefishanka UNIVERSAL, waxaanu intaa raaciyay oo uu yidhi, “Xaq buu dalku u leeyahay inuu nabadgelyada deegaankiisa la ilaashado wadanka jaarkiisa iyo inaanay meeshaasi noqonin meel ay fawdo ka abuuranto oo aragagixiso ku dhalato oo dhibaato u keena dalkooda. Ciidamada Somaliland ee tagay xuduudaha, xaq bay u leeyihiin, dalkoodii bay tageen oo dal ajaanib ah may tagin. Waxaananu leenahay dadka deegaanka Laascaanood iyo degmada Buuhoodle, niman Carruurtoodii iyo dadkooda gaystay Dibadaha oo Kenya laga guray oo qaxoonti u ah, yaanay carruurtiina imika naruuradu u bilaabantay, waayo maanta Laascaanood Jaamacad bay leedahay, qofkii qof dila waa loo dilayaa, nabadgelyada weeyaan. Markaa yaanay dhibaatada sharci darrada ah ee xukun-darrada ah ee maamul darrada ah, ee ku waartay Buuhoodle, yaanay idinku soo fatihin baanu leenahay. UCID haddaanu nahay waxaanu diyaar u nahay in dadkaasi waxay tabanayaan oo dhan aanu buuxino inaanu walaalnimadii iyo wada dhalashadii soo celino, inaanu ka fikirno sidii dalkeena aynu u horumarin lahayn, inaynaan wadadii qabiilka ee lagu jabay raacin, inaynu raacno wadadii wanaagsanayd ee illaahay inoo tilmaamay”
Dhinaca kale, Afhayeenka Xisbiga UDUB Cali Maxamed Yuusuf (Cali-Gurey) oo isna dhinacooda wax laga waydiiyay xaaladda Deegaanka Buuhoodle iyo Laascaanood, ayaa ku jawaabay oo yidhi, “Marka hore aad baanu uga xunnahay inay dhacdadaasi (Dagaalladii Buuhoodle) dhacdo, waana nasiib darro inay dhacdo. Waayo dad baa ku dhintay walaalaheena oo wax ina tari lahaa, waxaanse rumaysanahay Soomaaliyadii isku jirtay waxay u kala bixi kartaa oo keliya laba qaybood oo kala ah, Soomaaliya iyo Somaliland. Qaranimada iyo reernimaduna waa laba wax oo kala duwan isirka cid waliba waxbay isku ahaan kartaa, kuwan Hargaysa iyo kuwa Gaashaamo yaala waxbay isku yihiin.” Waxaanu intaa raaciyay Cali-Gurey oo uu yidhi, “In siyaasadda iyo Beelnimada la kala saaraa buu arrinku ku roon yahay. Arrintan imika waxaad moodaaa markii Puntland ay u aragtay inaanay si cunfi ah khilaafka iyaga iyo Soomaaliya u wada gali karin ay sidaa yeleen. Waxay yidhaahdaan Gobollada Sool iyo Sanaag, laakiin, reer Sanaag kuma jiraan. Markaa anigu waxaan aaminsanahay wixii u dhexeeya reer Sool iyo reer Somaliland intooda kale waxa lagu dhamayn karaa wada hadal. Dhinaca kale, ciidamada Qaranka ee Somaliland inay aminiga Somaliland sugaan waa wax qasab ah, cidna taa laga baryi maayo. Laakiin ciddii wax tabaynaysaa xaq waxay u leedahay in la dhagaysto oo si nabadgelyo ah loo wada hadlo oo wanaag lagu dhameeyo wixii khilaaf ah ee jira dalka gudihiisa oo dhan.”
Sidoo kale, Xoghayaha guud ee Xisbiga KULMIYE Kayse Xasan Cige, ayaa xaaladda Buuhoodle ku tilmaamay mid lagu khalkhal-gelinayo Doorashada iyo geedi-socodka hannaanka Diiwaangelinta. “Wallaahi, waxaanu u aragnaa arrin ayaan darro ah oo fool xun in la daadiyo dhiig, sida aynu ognahay waxaynu isu diyaarinaynaa doorashadii Kaadhadhkii qaadashadoodiibaa gebogebo ah, waxaanu u aragnaa anagu arrin la doonayo in lagu khal khal galiyo geedi-socodka doorashada. Sababtoo ah, waqtigan imika aynu joogno ee xasaasiga ee dadku ay u diyaariyeen inay u hawl-galaan doorashada in la abuuro xiisad colaadeed iyo dhibaato waxaanu u aragnaa inay mid laga dambeeyo.” Ayuu yidhi Keyse Xasan Cige.
Xoghayaha guud ee KULMIYE wuxuu ka hadlay hadal dhawaan ka soo yeedhay Madaxweyne Rayaale oo uu ku sheegay Madaxweynuhu in lagu cadaadinayo in uu sii daayo dadka u xidh-xidhan falalka Argagixiso ee Xabsiyada ku jira. “Waxa kale oo iyada aanu la yaabnay Madaxweynaha oo dhawaan ku dhawaaqay in Bulshada caalamku ay leeyihiin dad markii horeba loo haystay arrimo argagixiso hala siidaayo, taasina mid aynu qaadan karno maaha. Maanta waxa keliya ee uu heshiiska ka yahay (Caalamku) waxa weeye in lala dagaalamo argagixisada, taasina waa arrin kale. Anagu waxaanu u aragnaa inay wada socdaan oo ay isku lug leeyihiin arrintaa uu Madaxweynuhu leeyahay hala sii daayo (Argagixisada) iyo arrintaa imika ka socota gobollada bari oo ah in culays badan Madaxweynaha lagu saarayo oo la leeyahay sii daa dadka ka soo jeeda, gaar ahaan haddaynu eegno deegaankaas oo kale oo yaan la marinin sharciga. Isla markaana hala khal khal galiyo oo hala mideeyo dhaqdhaqaaqaa ka socda imika bariga Buuhoodle iyo Widh Widh iyo arrintan la leeyahay ha la siidaayo”
Geesta kale, Guddida Doorashooyinka Somaliland ayaa iyana wax laga waydiiyay arrintan bariga Somaliland iyo in ay saamayn ku yeelan karto arrimaha Doorashooyinka. “Wax saamayn ah kumay yeelan oo shaqadii Kaadh-badelku sidii ayuun bay u socotaa hadday deegaanadaa tahay iyo hadday meelo kale tahayba. Dad ay cabsi galisay inay jiraan waa laga yaabaa, laakiin wax saamayn ah kumay yeelan oo lama dareensanaba runtii oo sidii bay kaadh bixintu isaga socotaa.” Sidaa waxa yidhi Afhayeenka Guddida Doorashada Maxamed Axmed Xirsi (Geelle).
Previous PostHalkan ka daawo Muuqaalka Dadweyne ku hor mudaharaaday Xafiiska Guddoomiyaha Gobolka TogdheerNext PostGuddoomiyaha Golaha Guurtida oo ka hadlay Doorashada Madaxtooyada iyo xaalada bariga dalka	Blog